I-chatbot yokuthetha iilwimi ezininzi kubemi baseAfrika, abaphandi kunye nabenzi bomgaqo-nkqubo ukubonelela ngeempendulo ezikhawulezayo nge-COVID-19 - AfricArXiv
E papashwe ngu I-dialogShift kunye neAfriArXiv on 8th Meyi 2020 8th Meyi 2020
Isiqalo saseJamani IngxoxoShift kunye nendawo yokugcina imozulu yaseAfrika I-AfricArXiv phuhlisa ingxoxo yokuthetha iilwimi ezininzi kubemi baseAfrika, abaphandi kunye nabenzi bemigaqo-nkqubo ukubonelela ngeempendulo ezikhawulezayo nge-COVID-19.
Ubhubhani we-coronavirus ukoyisile umhlaba ngamandla amangalisayo. Uninzi lwabantu lukufumanisa kunzima ukugcina ujonge imeko yangoku kwaye ngaphezulu kwayo baba nexhala malunga nempilo yabo. Iqela lesibhedlele iBerlin Vivantes isebenzise i-chatovot ye-Covid-19 kwiwebhusayithi yabo ngoMatshi 2020. I-chatbot iphendula malunga nemibuzo eli-1000 ngosuku kwiilwimi ezahlukeneyo (isiJamani, isiNgesi, isiTurkey, isiRashiya kunye nesiArabhu) nakwixesha langasemva. Ubukrelekrele bokwenziwa kwezinto, ngokudibeneyo kunye nokuba nakho ukubuza imibuzo ngencoko, uphendula eyona mibuzo ichaphazelekayo ngentsholongwane, yenza ukuba izigulana zisebenze ngendlela yenkqubo yeengcali kwaye zinike iingcebiso ezithile malunga nokusebenza.
Abancedisi bokwenene abanjengo chatbots banokubakho okukhulu, kuba bafumaneka nge-24/7 kwaye baphendula imibuzo esisiseko kwiilwimi ezahlukeneyo ngokuzenzekelayo. Ukudluliselwa kolwazi olulula nolukhawulezayo kunceda abemi kunye nezigulana, ngakumbi kula maxesha okungaqiniseki.
Olga Heuser, Iidayalogshift CEO
Ingxoxo ye-COVID-19 ibonelela ngolwazi olukhawulezileyo malunga nosulelo olunokwenzeka kunye neempawu eziqhelekileyo kunye nalapho ulwazi oluthe kratya, oluthembekileyo kunye nolommandla lunokufunyanwa kuyo. Ngexesha lesigaba sokuqala senyanga, siya kubeka esweni imibuzo ebuzwa ziindwendwe zethu zewebhusayithi kwaye silungelelanise iimpendulo ngokufanelekileyo.
Iibhokisi zencoko kuyilo ziindlela zeencoko ezisebenza njengendawo yendalo yolwazi phakathi kwabasebenzisi beedatha kunye neenkonzo. Ngokudityaniswa kwale chatbot kwiwebhusayithi yeAfrikaArXiv iqela lethu liya kuba nakho ukwenza lula ukufikelela ngokukuko nangokufanelekileyo kolwazi olunxulumene nophando olusuka kwizazinzulu zase-Afrika ngokubhekisele kwi-COVID-19 nendlela yokubanceda ngcono ekwenzeni iziphumo zabo zophando zifumaneke kwizifundiswa zehlabathi. intetho kunye nengxoxo.
ULuka Okelo, weDyunivesithi yaseKenya [I-ORCID iD]
NgeNkqubo yokuLwimi lweNdalo (i-NLP) isebenzisa uGuqulelo lweGoogle, i-chatbot ifumaneka ngeelwimi ezingaphezu kwe-100 kubandakanya isiBhulu, isiArabhu, isiAmarinth, isiChichewa, isiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, isiHausa, isiHindi, Igbo, isiMalagasy, isiPhuthukezi, isiSuthu, iSomali, iSunda. , IsiSwahili, isiXhosa, isiYoruba nesiZulu. Ngexesha lesigaba sokuqala, siya kuvavanya ukuchaneka kotshintsho kwiilwimi zaseAfrika kwaye sifune ingxelo kwiindwendwe zethu ukuze sikwazi ukuphucula ukuguqulelwa kweelwimi ezisetyenziswa kakhulu kulo meko. Nxibelelana nathi ukuba ungathanda ukusinceda ukongeza ezinye iilwimi zase-Afrika kolu luhlu, okanye kwiingcaciso, imibuzo okanye iinkxalabo.
IngxoxoShiftIplatifomu yencoko ye-AI yenza ukuba iinkampani kunye nemibutho idibanise amava aphilayo kunye azenzekelayo kumava amaninzi kwizixhobo ezininzi kwaye ivumela unxibelelwano lwabathengi okanye lomsebenzisi ngokuthumela imiyalezo okanye ukuxoxa (bots) kwiindawo ezahlukeneyo zokuchukumisa.